Tababare Mikel Arteta oo ka hadlay mustaqbalka Aubameyang ee kooxda Arsenal – Gool FM
(London) 06 Mar 2020. Macalinka kooxda kubadda cagta Arsenal ee Mikel Arteta ayaa muujiyay sida uu ugu dhagan yahay weeraryahnkiisa reer Gabon ee Pierre-Emerick Aubameyang.
Dhinaca kale macalin Mikel Arteta ayaa si cad u sheegay in maamulka Gunners ay kala hadlaan gabtanka si loo kordhiyo qandaraaskiisa ka hor dhamaadka xilli ciyaareedka.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa 20 gool ka dhaliyay dhamaan tartamada kala duwan xilli ciyaareedkan, wuxuu ka badan yahay mid kasta oo ka mid ah saxiibadiis kula sugan kooxda, taasoo ka dhigtay Gunners in ay u hogaansanto kordhinta qandaraaskiisa.
Arteta ayaa aaminsan in Aubameyang, oo qandaraaskiisu uu dhacayo dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda, inuu yahay weeraryahan heer caalami ah inkastoo uu ku guuldareystay inuu koobab la qaado kooxda ka dhisan Waqooyiga London, xilli kooxo badan oo Yurub ah ay xiiseynayaan inay la siixiixdaan.
Macalinka reer Spain ayaa wareysi uu bixiyay wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Pierre-Emerick Aubameyang ee kooxda Arsenal wuxuuna yiri:
“Waa inaan qandaraaska u kordhinaa ka hor dhamaadka xilli ciyaareedka, kaddib waan arki doonaa hamigeenna”.
“Aniga ahaan waxaan doonayaa inuu nala joogo, xaalad kasta ay kooxda ku sugan tahay”.